FBC - Guyyaatti dhugaatii alkoolii tokko qofallee haata’u dhuguun umurii gabaabsa: qorannoo
Guyyaatti dhugaatii alkoolii tokko qofallee haata’u dhuguun umurii gabaabsa: qorannoo
Finfinnee, Ebila 5, 2010 (FBC) - Guyyaatti dhugaatii alkoolii tokko qofallee haatatu dhuguun umurii namaa gabaabsuu akka danda’u qorannon bal’aa haaraa geggeffame beeksise.
Qorannoon namoota dhugaatii dhugan kuma 600,000 irratti geggeffame kun akka ibsutti torbanitti dhugaatii alkoolii 5 hanga 10 dhuguun naannoo ji’oota ja’aan umurii akka gabaabsu mul’iseera.
Kun ammoo dhugaatiin alkoolii namni tokko dhugu akka dabaleen ittumaa akka dabalu ibsameera; fakkeenyaaf, dhugaatii hanga 18 yookiin isaa ol kan dhugan umurii hanga waggaa shanii akka dhaban qorannichi ibseera.
Hayyuleen (experts) bu’aan qorannoo kanaa yaada dhugaatiin xiqqoo namaaf gaariidha jedhuun kan mormu ta’uu yaada dhiheessaniiru.
Qorattoonni fayyaa fi amala dhuguu namoota dhugaatii alkoolii dhuganii biyyoota 19 wal-bira qabanii ilaalan, namoonni umurii waggaa 40 kaasanii umurii isaanii hafe guutuu yoo dhugan umurii hangamii dhabuu akka danda’an herreganiiru.
Kanaanis daangaan gaariidha jedhame guddichi torbanitti yuunitii 12.5 – (biiraa shan yookiin wayinii burcuqqoo mili-liitira 175) ta’uu argataniiru.
Haata’u malee, akka isaan jedhanitti sadarkaa kamiyyuu haata’u dhugaatii dhuguun carraa dhibee onneen wal-qabatuuf saaxilamuu dabaleera.
Qorannoowwan kanaan duraa wayinii diimaa dhuguun onneef gaarii akka ta’e yaada kennaniiru; qorattoonni muraasni faayidaan isaa kun xooxeffameera jedhanis.
Qorannoon Deenmaarkitti geggeffame tokko torbanitti si’a sadii fi afur dhuguun carraa dhibee sukkaaraa 2 saaxilamuu hir’isuun akka wal-qabatu eeree ture.
Qorattoonni kunniin akka jedhanitti qorannoon kun qajeelfama UK dhiyeenyaa dhugaatii fudhtamu hir’isuuf ba’e, erga 2016 as dhiirris ta’e dubartiin torbanitti alkoolii yuunitii 14 ( torbanitti dhugaatii ja’a) ol akka hi-dhugne dhorku, nideggara.
Dhugaatiin Xaaliyaanii, Poorchugaal fi Ispeenitti jajjabeeffamu kana dhibbantaa 50n caala; akkasumas, Ameerikaatti daangaan guddaa dhiirotaaf dacha kanaatti siqa.
Haata’u malee, Ogeettiin Sirna Nyaataa Faawundeeshinii Onnee Biritish, hanga tokko qorannucha qarshiin deggeeree, Viktooriyaa Taylar kana jechuun UKn milkaa’ina ishee irratti of gatuu qabdi jechuu miti jedhaniiru.
“Namoonni baay’ee UK keessaa amaleeffatanii hanga jedhame (jajjabeeffamuun) ol dhugu” jedhaniiru.
Yuunivarsitii Kaambiriij irraa Doktar Angeelaa Wood qorannucha hogganan ergaan ijoo qorannoo kanaa - dhugaatii nidhugdu yoo ta’e xiqqoo dhugaa umurii dheeraa akka jiraattaniif isin gargaaruu danda’a akkasumas carraa dhibee onneen wal-qabatan hedduuf saaxilamuu hir’isa.
Oduuwwan Biroo « Qorattoonni talaalliin alarjii lawuzii hantuuta irratti yaalamee bu’aan mul’achuusaa ibsan	Teeknooloojii haaraa jiinii sirreessuu fi fooyyessuu dandeessisu »